"मरो अर्को दिन": अभिनेता र सुविधाहरू
आज हामी चलचित्र कुरा "अर्को दिन मरो।" अभिनेता र सुविधाहरू hereinafter प्रस्तुत गरिनेछ। जेम्स बण्ड - यो एक काल्पनिक ब्रिटिश बुद्धि एजेन्ट "007" बारेमा श्रृंखला देखि बीस फिलिमहरु छ।
पहिलो, हामी फिलिम को षड्यन्त्र छलफल "अर्को दिन मरो।" अभिनेता तल प्रस्तुत गरिनेछ। तीन एजेन्ट MI6, Dzheyms बण्ड सहित, उत्तर र दक्षिण कोरिया को अलग भएको demilitarized क्षेत्र मा भित्र पस्नु। आफ्नो लक्ष्य - टैन-रवि चन्द्रमा मार्न। यो हीरे लागि यो साटासाट, पश्चिम हतियार आपूर्ति। एजेन्ट तस्करों बाटोमै र तिनीहरूलाई नक्कलको लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। घटनाहरू एक सैन्य आधार मा दक्षिण कोरिया संग सीमाना मा फैलाउनु। हीरे भरिएको मामला मा पूर्व-बण्ड, विस्फोटक C4 स्थानहरूलाई।
पियर्स Brosnan जेम्स बण्ड प्ले। हामी आइरिस र अमेरिकी अभिनेता र निर्माता बारेमा कुरा गर्दै छन्। श्रेणीमा चार चलचित्रमा बण्ड रूपमा कलाकार। ब्रिटिश साम्राज्यको आदेश को अधिकारी। Drogheda को शहर मा 1953 मा जन्मिएको हो। एक वर्ष पछि, केटा जन्म भएको थियो पछि, आफ्नो बुबा परिवार छोडेर। आमा उनको हजुरआमा को हेरविचार मा उनको छोरा बाँकी। म Navan बस्थे। म उनको आमा संग लन्डन गए। सोह्र मा Brosnan को स्टुडियो मा काम गर्न गए। त्यो कला लन्डन गरेको केन्द्र मा अभिनय अध्ययन। टेलिभिजनमा र अंग्रेजी थिएटर मा प्ले को अन्त पछि। उहाँले एक अभिनेता रूपमा ख्याति प्राप्त गरियो। आफ्नो परिवारका साथ अमेरिका सारियो। Rodzher Mur यसलाई इन्कार गर्दा उहाँले बण्ड को भूमिका प्रस्ताव थियो।
Holli Berri छवि Dzhiakinty जनसन embodied छ। यो एक अमेरिकी फिलिम अभिनेत्री छ। को "एमी" को विजेता, "गोल्डन ग्लोब" र "ओस्कार"। त्यो क्लिभल्याण्ड, अगस्त 14 मा 1966 मा जन्म भएको थियो। Dzhudit Enn - आमा एक नर्स रूपमा मनोरोग अस्पतालमा काम गरे। जेरोम Dzhessi Berri - अभिनेत्री पिता - अफ्रिकी अमेरिकी। उनको आमा संग एक क्लिनिक मा कामदारको थियो। पछि एक बस चालक मा गरियो। Nellie Dicken - आफ्नो आमाको छेउमा उनको हजुरआमा Derbyshire आउँछ। हजुरवुवा ERL Ellsvort Houkins ओहियो मा जन्म भएको थियो। आमाबाबुले त्यो चार वर्षको हुँदा, समय मा अभिनेत्री छोडपत्र। त्यो हाइडी सँगै - दिदी उनको आमा द्वारा उठायो। म बेडफोर्ड हाई स्कूल मा प्रशिक्षित गरिएको थियो। त्यसपछि उहाँले छोराछोरीको विभाग मा, सुपरमार्केट मा काम गरे। त्यसपछि त्यो Cuyahoga समुदाय मा अध्ययन। स्कूल एक अखबार सम्पादक, वर्ग अध्यक्ष रूपमा काम गरे र समूह को कप्तान स्थानीय टोली समर्थन रूपमा आफूलाई देखाए। उहाँले सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा भाग। उहाँले पुरस्कार को एक नम्बर जित्यो। त्यो "मिस" प्रतियोगिता मा पहिलो अफ्रीकी-अमेरिकी अमेरिकी प्रतिनिधि थियो। यसमा भविष्यमा अभिनेत्री छैटौं स्थानमा जित्यो। को लघु "बैठक गुडिया" मा काम गर्दा उनले एक coma गए। पहिलो प्रकारको मधुमेह - अभिनेत्री निदान थियो।
Gustav Greyvz र काओ पनि फिलिम को प्लट मा आंकडा "अर्को दिन मरो।" Tobi Stivens र रिक Yune अभिनय गर्ने कलाकार यी तस्बिरहरू embody।
Rozamund Payk मिरांडा फ्रस्ट प्ले।
Dzhudi Dench एम मा reincarnated
इच्छा यूं ली कर्नल चन्द्रमा रूपमा तारा अङ्कित।
Dzhon Kliz Q. प्ले
राहेल अनुदान को छहरा इच्छा रूपमा फिल्म देखियो।
Emilio Echevarria राउल प्ले।
सामन्था बण्ड मिस Moneypenny रूपमा reincarnated।
Maykl Medsen भूमिका Domian श्री falco उतरा।
माइकल Gorevoy Vlad Popov प्ले।
कलिन सालमन चार्ल्स रबिन्सन को भूमिका खेलेका।
सिमोन Andreu डा अल्वारेज को छवि embodied।
Madonna Verity प्ले।
अब चलचित्र बारे केही रोचक विवरणहरू लागि "अर्को दिन मरो।" अभिनेता माथि प्रस्तुत गरिएका छन्। फिल्म मिश्रित समीक्षा आलोचकहरु पाए। त्यहाँ बरफ मा एक पीछा छ जो बीच आर्कटिक दृश्य, मा आइसल्याण्ड लेक Jökulsárlón खिच्नुभयो थिए।
Raymond बेन्सन हकदार एक छायांकन उपन्यास सिर्जना "अर्को दिन मरो।" चित्रमा तपाईं जेम्स बण्ड पुस्तकमा ग्रन्थकारिता देख्न सक्छौं। फ्लेमिंग आफ्नो साहित्यिक नायक-जासूस गर्न लेखक को नाम पारित। बण्ड एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन मा प्रशिक्षण गरिएको छ। चित्रहरु अघिल्लो श्रृंखला मा प्रयोग भएको थियो जो एक गोदाम प्रविधि, त्यहाँ देखाइएको छ।
ब्राड पिट संग सिनेमा: सबै भन्दा राम्रो को सूची
जीवनी नतालिया Kustinskaya। सोभियत अभिनेत्री Natalya Kustinskaya: चलचित्र, प्रेम जीवन, छोराछोरी
अभिनेता 'सिंड्रोम ड्रैगन "र आफ्नो भूमिकाको
Tanya को "जिम शिक्षक" नाम के हो? हामी अभिनेत्री Anastasiya Panina बारेमा थप जान्न
कसरी "Drôme" मा विज्ञापन गर्न? को "Droma" बाट कसरी विज्ञापन हटाउन?
Drones विमानहरु लागि साँच्चै खतरनाक हो?
आफैलाई कसरी पूरा गर्ने? शीघ्र समर्थक!
पैसा को लागि Simoronsky अनुष्ठान। रीतिथितिहरू र मुद्रा को लागि संस्कार
Lathe-मिलिंग धातु सीएनसी आफ्नै हातले घरमा
क्रोमियम, एक रासायनिक तत्व: वर्णन, गुण र सूत्र को कैरेक्टराइजेशन
8 पिन - भिडियो कार्ड गर्न एडप्टर। वर्णन, उद्देश्य, जडान
सीईओ। जिम्मेवारी र अधिकार
यस्तो अवस्थामा के कम्प्युटर हङ।
व्यञ्जनहरु: तरकारी संग ओवन मा चिकन, स्याउ संग भरी, सेतो रक्सी